စာတမ်းများ О словаре
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၌ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည့် အဘိဓာန်များပါဝင်ပါသည်။
၁။ မြန်မာ-ရုရှားအဘိဓါန်။ အင်၊အင်၊နိုဗိကော့ဗ်၊ အယ်(လ်)၊အေ၊ဒါဗေဒေါဖ့်၊ ကေ၊ပီ၊ရှမ်ဂင်၊ ဘီ၊ယာ၊ နဒ်တိုချင်ကို၊ စာတည်း ဂျီ၊အက်ဖ်၊မီးနီနာ၊ ဦးကျော်ဇော။ မြန်မာသဒ္ဒါအကျဉ်းချုပ်ရေးသားချက်၊ ဘီ၊ဗီ၊ကာဆယ်ဘီခ်ျ၊ ရုရှားသာသာစကား ထုတ်ဝေရေးဌာန၊ မော်စကိုမြို့ ၁၉၇၆။
၂။ ရုရှား-မြန်မာအဘိဓါန်။ အဲန်၊အဲန်၊နိုဗိကော့ဗ်နှင့် ဗီ၊ပယ်၊ကိုလိုဗ်ကော့ဗ်၊ တည်းဖြတ်သူ ဦးအေးရွှေ၊"ဆိုဗီယက်အင်စီကလိုပီးဒီးယား"နိုင်ငံတော်ထုတ်ဝေပုံနှိပ်တိုက်၊ မော်စကိုမြို့ ၁၉၆၆။
၃။ ရုရှား-မြန်မာအဘိဓာန်။ ဂျီ၊အက်ဖ်၊မီးနီနာ၊ တည်းဖြတ်သူ ဦးကျော်ဇော၊ မော်စကိုမြို့"မူရာဝေ"၂၀၀၂။
အက်န်၊အေ၊လစ်တိုဗာဒေ့ါဗ်@ဦးလူတင်၊ အက်စ်၊အီ၊လီဇော်ဂွပ်@ဦးလှမောင်၊ အေ၊အမ်၊ဘူလာချီနိကော့ဗ်၊ ဗယ်၊ယူ၊ကင်မ်၊ ယူ၊မာရ်သီနောဗာ၊ အေ၊ဖျော်ရ်ဒါရော်ဗာ၊ အမ်၊ကျမ်ချန်ကို၊ အေးသန္တာမြင့်၊ အေဇွန်မို၊ ချမ်းမြေ့ဝသန်၊ သင်းလွင်လွင်ထူး၊ စောယမင်းနိုင်၊ ဆုလဲ့ရည်၊ ဆုမြတ်သီရိခိုင်၊ ချယ်ရီအောင်၊ သွယ်သွယ်အေး၊ မေဖြိုးကျော်၊ ဟန်ထူးဝါ၊ ယွန်းမီမီအောင်၊ သန္တာသန်းအောင်၊ ရွှေရည်မြင့်မြတ်၊ အိ‌န္ဒြေမင်းမင်း၊ ချယ်ရီနိုင်၊ ပန်းဖြူ တို့ကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တီထွင်သူ - www.bkrs.info
ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မူပိုင် - အီဗန် ရူမာ rym.van@ya.ru
На сайте представлены материалы следующих словарей:
1. Бирманско-русский словарь, Н.Н.Новиков, Л.А.Давыдов, К.П.Шаньгин, Б.Я.Надточенко под ред. Г.Ф.Мининой, У Чо Зо; Краткий очерк грамматики бирманского языка, В.Б.Касевич, Москва, "Русский Язык", 1976 г.;
2. Русско-бирманский словарь, Н.Н.Новиков, В.П.Колобков под ред. У Эй Шве, Москва, "Советская Энциклопедия", 1966 г.;
3. Учебный русско-бирманский словарь, Г.Ф.Минина под ред. У Чжо Зо, Москва, "Муравей", 2002 г.
Спасибо всем, кто принимал участие в создании сайта:
Н.А.Листопадов, С.И.Лизогуб, А.М.Булочников, В.Ю.Ким, Ю.Мартынова, А.Фёдорова, М.Темченко, Эй Танда Мьин (Эста), Эй Зун Моу, Чхан Мьей Ва Тан, Тин Лвин Лвин Тху, Со Я Мин Найн, Сху Ле Ей, Сху Мья Тири Кхайн, Чери Аун, Тве Тве Эй, Мей Пхьоу Чжо, Хан Тху Ва, Юн Ми Ми Аун, Танда Тан Аун, Шве Ей Мьин Мья, Эйн Дрей Мин Мин, Чери Найн, Пан Пхью и др.
Автор сайта: Иван Рымарь rym.van@ya.ru